🥇Best Commodity Trading ပွဲစားများ ဇွန်လ 2022 | အခမဲ့ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန်။
ကုန်စည်ဈေးကွက်တွင် တူရိယာများဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ရှေသကြား၊ ဂြုံ, ဆီမာကျောသောသတ္တုများနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့. အိုင်ဒီယာသည် စျေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျဆင်းခြင်းတို့ကို မှန်ကန်စွာ တွေးဆရန်ဖြစ်သည် - သင့်အား ကုန်သွယ်မှုမှ အမြတ်အစွန်းတစ်ခုရရှိစေရန် ဦးတည်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုလို အသံလား။ ပထမဦးစွာသင်ကောင်းတစ်ဦးရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကုန်စည်ကူးသန်းပွဲစား. မေးခွန်းထုတ်ထားသော ပလပ်ဖောင်းသည် သင့်အား ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဒီလမ်းညွှန်မှာကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှုဆိုတာဘာလဲ၊ ဒီပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားကိုအွန်လိုင်းမှာဘယ်လို ၀ င်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပါလေ့လာသွားမှာပါ။ အခြေခံများအပြင်ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများ - နည်းဗျူဟာများ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်နောက်ဆုံးတွင် - ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အကောင်းဆုံးကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သွားပါမည်။
€ 20 (၀.၀၀၀၂ ကွက်)၊
7 သင်၏ စစ်ထုတ်မှုများနှင့် ကိုက်ညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ
min ။ အပ်ငွေ
ယနေ့အသုံးပြုသူအသစ် 299 ဦး
CySEC၊ CBFSAI၊ BVIFSC၊ ASIC၊ FSCA၊ FSA၊ FFAJ၊ ADGM၊ FRSA
GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF
ယနေ့အသုံးပြုသူအသစ် 489 ဦး
FCA၊ CySEC၊ ASIC၊ CFTC၊ NFA၊ BAFIN
မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးပုံစံမဆိုကဲ့သို့ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှုသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ သင်မျှော်လင့်သည်မှာသင်ရောင်းဝယ်သောကုန်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းမှအမြတ်အစွန်းရနိုင်သည်။ ၎င်းကိုစျေး၏ရောင်းလိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအားကဆုံးဖြတ်သည့်တန်ဖိုးလမ်းကြောင်းကိုမှန်ကန်စွာခန့်မှန်းခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
သင်သိသည့်အတိုင်းကုန်ပစ္စည်းများသည် များသောအားဖြင့် အခြားသော ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ထိတွေ့နိုင်သော ကုန်ကြမ်းများ။ သံမဏိနှင့် ရေနံကဲ့သို့သော စက်မှုနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ထုတ်ကုန်များ၏ လမ်းကြောင်းများကို တွေးကြည့်ပါ။ ထို့အပြင် အီလက်ထရွန်းနစ် လုပ်ငန်းများတွင် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားနိုင်သော ပစ္စည်းများ အများအပြား ရှိနေပြီး ရွှေ၊ ငှေ, ကြေးနီနှင့် လစ်သီယမ်။
နူးညံ့သောကုန်ပစ္စည်းများအရဂျုံနှင့်ပဲပုပ်မှသကြား၊ အေးခဲနေသောလိမ္မော်သီးဖျော်ရည်များနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအထိကုန်သွယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သွယ်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုမကြာမီကုန်တော့မည်၊
၎င်းကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှု၏လက်တွေ့ဥပမာကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာမှာသင်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကုန်သွယ်မှုအများဆုံးကုန်သွယ်မှုဖြစ်တဲ့ရွှေ။
တစ်အောင်စကိုဒေါ်လာ ၁,၉၀၀ နဲ့ - ရွှေလို့ထင်တယ် မတန်တဆ
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပေးပါ ဝယ်ခြင်း သင်၏ပွဲစားနှင့်အမိန့်။
ရွှေဈေး $1,900 ထက် မြင့်ပြီး အရောင်းအ၀ယ်ထွက်ပါက အမြတ်များမည်။
ဤအရာကိုစိတ်ထဲထားပြီးထားပါ ရောင်းချ သင်၏ပွဲစားနှင့်အမိန့်။
မှန်ကန်ပြီး စျေးကျသွားရင် အမြတ်ပါ။
အွန်လိုင်းကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးမြင့်တက်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ တက်သည်ဖြစ်စေငွေရှာနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ပထမ ဦး ဆုံးမှန်ကန်စွာပိုင်ဆိုင်မှုသွားမယ့်လမ်းကြောင်းကိုခန့်မှန်းရမယ်။ ဒါကစျေးကွက်စိတ်ဓာတ်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မည်သည့်နေရာ၌ရှိသည်ကိုခန့်မှန်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏တန်ဖိုးသည်အောက်သို့ကျရောက်သောလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သောအခါယင်းသည် 'bearish' စျေးကွက်ကိုညွှန်ပြသည်။
ဤပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာပါက၎င်းသည် 'အီရန်' စျေးကွက်၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်အွန်လိုင်းပွဲစားများသည်ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှုကိုသြဇာသက်ရောက်စေသည်။ သင်ကမ်းလှမ်းမည့်သြဇာသည်သင်နေထိုင်သည့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်ယူကေနှင့်အီးယူတွင်ကုန်ပစ္စည်းအများစုအပေါ် ၁း၁၀ နှင့်ရွှေ ၁:၂၀ အထိဖော်ပြထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ရှယ်ယာများကို ၁၀ မှ ၂၀ အထိမြှောက်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ပွဲစားထံမှချေးငွေဟုခေါ်နိုင်သည်။
သင်သည် ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် အကောင့်တစ်ခုဖွင့်သည်။
သင့်အကောင့်အသစ်ထဲသို့ $1,000 အပ်နှံလိုက်ပါ။
ထို့နောက်သင်သည်နေရာချသည် ဝယ်ခြင်း Brent ရေနံစိမ်းတွင် $200 မှာယူမှု – တစ်စည်လျှင် $30 ရှိသည်။
၂ နာရီအကြာတွင် Brent ရေနံစိမ်းတန်ဖိုးသည် ၃၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
ယင်းက စျေးနှုန်း 16.6% မြင့်တက်မှုကို သရုပ်ဖော်သည်။
သင်နေရာချသည် ရောင်းချ ရာထူးအတွက် သင့်အမြတ်ငွေကို ရအောင်ယူပါ။
မင်းရဲ့ ကနဦး $200 ရှယ်ယာကနေ အမြတ် $33.20 ရခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အထက်ပါဥပမာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်ကုန်သွယ်မှုကိုသင်ဆန္ဒရှိသည့်အချိန်တွင် ၀ င်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ထွက်နိုင်သည်။ သွားမလား တိုတောင်းသော နှင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးပိတ် ဝယ်ခြင်း အမိန့် - သို့မဟုတ်ပိတ် ဝယ်ခြင်း တစ် ဦး ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်အမိန့် ရောင်းချ အမိန့်။
ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှုကိုလုပ်ကြံနည်းတစ်နည်းထက်မကရှိသည်။ တကယ်တော့တော်တော်များများရှိပါတယ် - တစ်ခုမှတစ်ခုကမင်းကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်နေစေတဲ့အရာမရှိပါဘူး စတိုးဆိုင် ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု။
မသိသေးသူများအတွက် ကုန်စည် ETFs တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုကို အသုံးပြု၍ ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်စေပါသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ETF မှတစ်ဆင့် ကုန်စည်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် သင်သည် သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ အနာဂတ်စျေးနှုန်း (ဥပမာ-ဆီ သို့မဟုတ် ရွှေကဲ့သို့) တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပါသည်။
ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ရွှေ ETF များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ပွဲစားသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရွှေ (bullion) ကို ၀ ယ်ယူသိုလှောင်လိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးသည်တက်သွားပြီးကျသွားလိမ့်မည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးကွက်တန်ဖိုးနှင့်ထပ်တူကျသည်။
Commodity ETF ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများသည်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ပိုမိုအကျိုးရှိမည်ဟုမှတ်ယူသည်။ သို့သော်သင်ဆန္ဒရှိသည့်အခါတိုင်း (စျေးကွက်အတွင်း) သင်၏ ETF ရာထူးကိုပိတ်နိုင်သည်။
ဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်း ကုန်သွယ် ကုန်စည်သည် ကွဲပြားမှုအတွက် စာချုပ်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည် (CFDs) ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် CFD သည် ပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ထုတ်ပေးသော ငွေကြေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ CFD များသည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသိမြင်ရန်အတွက်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်။
ရွှေကိုကုန်ပစ္စည်းအဖြစ် သုံး၍ CFD ၏ရိုးရှင်းသောဥပမာတစ်ခုကိုတင်ပြကြပါစို့။
ရွှေဈေးကတော့ တစ်အောင်စကို ၁၈၇၀ ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် CFD တူရိယာသည် ၎င်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။
ရွှေ၏တန်ဖိုးသည် 1% တိုးလာလျှင် သို့မဟုတ် လျော့သွားပါက CFD သည် ဤရွေ့လျားမှုကို တူညီသည်နှင့်တူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း CFD သည်ကုန်စည်၏တကယ့်ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးကိုစောင့်ကြည့်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆိုကုန်သွယ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပို့ဆောင်ရန်သင်စဉ်းစားရန်လုံးဝမလိုအပ်ပါ။ အလားတူကိုကိုး၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံအတွက် CFD ကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
ထို့အပြင်ကုန်ပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းမည်သည့်နေရာတွင်သွားမည်၊ ခြေဖဝါးကိုတက်ပြီးအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ရန်မည်သည့်လမ်းကြောင်းအပေါ်မှန်ကန်စွာမှန်းဆရန်လိုသည်။ မဟုတ်ပါ၊ တကယ်တော့၊ အကောင်းဆုံးကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာကောင်းကျိုးများသည်အမြဲတမ်းဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်အစီအစဉ်ရှိလိမ့်မည်။ ဤသည်သည် 1:3စွန့်စားမှု / ဆုလာဘ်မဟာဗျူဟာမှတဆင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် - stop-loss နှင့်ယူ - အမြတ်အမိန့်များအားဖြင့်ကွပ်မျက်သော။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ရွှေ၏အမှု၌ရန် ပိုင်ဆိုင် ပစ္စည်းတစ်ခုအောင်စကဒေါ်လာတစ်ထောင်ကျော်အကုန်အကျခံလိမ့်မယ်။ သို့သော် CFD များမှတဆင့်ရွှေကိုအရောင်းအဝယ်ပြုခြင်းအားဖြင့် - သင်သည်အလွန်သေးငယ်သောပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
ကုန်စည်ဒိုင်အနာဂတ်သည်ရှုပ်ထွေးသောဘဏ္instrumentsာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများဖြစ်သည်။ နာမ၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအနာဂတ်အနာဂတ်သည်သင့်အားကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာပစ္စည်း၏အနာဂတ်တန်ဖိုးအပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအနာဂတ်စာချုပ်သည်ကုန်ဆုံးခြင်းမပြုမီ ၃ လခန့်သာသက်တမ်းရှိလိမ့်မည်။
သို့သော်အနာဂတ်စာချုပ်များသည်ဤအချိန်ကာလထက် ပို၍ ကြာရှည်သောအထူးဖြစ်ရပ်များရှိသည်။ အနာဂတ်ကန်ထရိုက်သက်တမ်းမည်မျှပင်ကုန်ဆုံးမည့်နေ့ကုန်ဆုံးသည်ဖြစ်စေသင်သည်ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်တရားဝင်တာဝန်ရှိသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်စာချုပ်များကိုဘဏ္bigာရေးကုမ္ပဏီကြီးများကယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ထိုအရာဖြင့်သင်၏အနာဂတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုချိန်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ သင့်တော်သောနေရာတိုင်းတွင်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုသင်ချထားနိုင်သည်။
ငွေဈေးသည် ထရွိုင်အောင်စကို ၂၂.၀၀ ဒေါ်လာဟု ဆိုကြပါစို့။
သင်တစ် ဦး အပေါ်ကုန်သွယ်မှုသို့သွားပါ ရှည်လျားသော အနေအထား။
ငွေစာချုပ်သည် $25.50 ဖြင့်ပိတ်သည် - သင်အမြတ်ငွေရနိုင်သည်။
တနည်းအားဖြင့် ငွေစာချုပ်သည် ထရွိုင်အောင်စလျှင် $20.50 ဖြင့်ပိတ်ပါက- သင်သည် အရှုံးပေါ်ပါသည်။
သတင်းကောင်းမှာလက်လီကုန်စည်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်အနာဂတ်စာချုပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိတ်ပူစရာမလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ CFDs တွေဟာအတူတူပဲအလုပ်လုပ်ကြတာမို့ရှည်လျားပြီးတိုတောင်းနိုင်ပြီးသြဇာသက်ရောက်နိုင်တဲ့အထိပါပဲ။ သို့သော် CFD များသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်တရားဝင်ကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်တရားဝင်တာ ၀ န်မရှိပါ။
ကုန်စည်ရွေးချယ်မှုများသည်အနာဂတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည် - သူတို့သည်နှစ်မျိုးလုံးရှုပ်ထွေးသောဘဏ္financialာရေးတူရိယာများဖြစ်သည်။ အလားတူဖြစ်သော်လည်းနှစ်ခုအကြားသိသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ထိမိသည်နှင့်အမျှကုန်စည်ဆိုင်ရာအနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့မတိုင်မီသို့မဟုတ်ရောင်းချရန်တရားဝင်တာဝန်ရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုန်စည်ရွေးချယ်စရာသင်နှင့်အတူပေး မှန်သောဒါပေမယ့် မဟုတ် အဆိုပါကုန်စည်ကိုဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချရန်တာဝန်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုမအောင်မြင်ပါကသင်ဆုံးရှုံးရမည့်အရာမှာ“ ပရီမီယံ” ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ပရီမီယံ (သို့မဟုတ်စာချုပ်၏စျေးနှုန်း) သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုစာချုပ်၏တန်ဖိုး၏ ၁၀% အထိရှိနိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်ဆန္ဒရှိသည့်ကုန်စည်ရွေးချယ်မှုစျေးကွက်ကို ၀ င်ရောက်ရန်စာချုပ်တန်ဖိုး၏ ၁၀% သာသင်စွန့်စားရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုမအောင်မြင်ပါကသင်ငွေရေးကြေးရေးဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
အမှာစာရသောအခါသင်အသုံးပြုလိမ့်မည် puts နှင့်ခေါ်ဆိုမှုများ။ အတိုချုပ်ပြောရရင်သင်ဈေးကျလိမ့်မယ်ထင်လျှင် - သင်ဝယ်ယူမည် ထီ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူစျေးနှုန်းမြင့်တက်မည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကသင်ဝယ်ယူမည် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု.
သင်သည် လက်ရှိ ပေါက်ဈေးဖြစ်သော စပါးတစ်ဘူးလျှင် ဒေါ်လာ ၂၄၀ ဖြင့် ရောင်းဝယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည်။
သင်၏သုံးလကြာရွေးချယ်ခွင့်စာချုပ်ရှိ 'ဒဏ်ရိုက်စျေး' သည် $270 ဖြစ်သည်။
သင့်ရည်မှန်းချက်မှာ စပါးစာချုပ်သည် ဒဏ်ခတ်ဈေးထက် သို့မဟုတ် အောက်တွင် ပိတ်မည်ကို ခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။
သငျသညျခံစားချက်စျေးနှုန်းလိမ့်မယ် တက် - ဒါဆိုမင်း ၁၀၀ ဝယ်မယ် ခေါ်ဆိုခ ရွေးချယ်မှုများ။
ရာထူးတွင် ပရီမီယံကြေးမှာ $13.50 ဖြစ်သည်။
သင်၏ စာချုပ်စာတမ်း 100 သည် သင့်အား စုစုပေါင်း $1,350 ပေးချေသည် - ၎င်းသည် သင်ရွေးချယ်ထားသော ပွဲစားအား ပေးဆောင်သော ပရီမီယံ အလုံးစုံဖြစ်သည်။
သင်ဟာများသောအားဖြင့်စျေးကွက်ကို ၀ င်ငွေအနိမ့်ဆုံးပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်သို့သွားနိုင်သည်၊ သင်မှန်ကန်စွာခန့်မှန်းလျှင်သင်အမြတ်အစွန်း အကယ်၍ သင်မှားယွင်းစွာကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်လျှင် - သင်သည်သင်၏ပရီမီယံ၏ကုန်ကျငွေကိုသာဆုံးရှုံးသည်။
ရွေးချယ်စရာများ သက်တမ်းမကုန်မီ ရက်အနည်းငယ်အလိုတွင် ဂျုံဈေးသည် ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဖြစ်သည်။
သင့်ရွေးချယ်ခွင့်များကို အချိန်အတော်ကြာ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သည့်အတွက် ဤသည်မှာ သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်၊ စျေးနှုန်း $270 ဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုများဝယ်ယူခြင်းဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သင်လုပ်သော ရွေးချယ်ခွင့်များကို ယခု ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် စာချုပ်တစ်ခုလျှင် $30 ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုအတွက် $13.50 ဖြစ်သည့် သင်ပေးဆောင်ခဲ့သော ပရီမီယံကိုလည်း နုတ်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုလျှင် အမြတ်ငွေ $16.50 ရရှိစေသည်။
စုစုပေါင်း ခေါ်ဆိုမှု 100 ကို သင်ဝယ်ယူခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် ဤကုန်စည်ရွေးချယ်မှုများ ကုန်သွယ်မှုတွင် သင့်အမြတ်ငွေမှာ $1,650 (စာချုပ် 100 x $16.50) ဖြစ်သည်။
အထက်တွင်တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း options လမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမြတ်အမြတ်အမြောက်အများကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်သင်၏အလားအလာရှိသောဆုံးရှုံးမှုများကိုအနိမ့်ဆုံးအဖြစ်သို့ရောက်စေနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားကိုသင်ရှာဖွေသောအခါကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုအဓိကအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ထိုအမျိုးအစားများမှာ 'သတ္တု'၊ 'စွမ်းအင်' နှင့် 'စိုက်ပျိုးရေး' ဖြစ်သည်။
သို့သော်မည်သည့်သတ္တုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ သို့သော်ရွှေကဲ့သို့သော 'အဖိုးတန်' သတ္တုများသည်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့်စီးပွားရေးမငြိမ်သက်မှုများကိုကာကွယ်ရန်ကုန်သည်များကမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိကြောင်းသင်သိပါသလား။ ကုန်ကြမ်းသတ္တုများတွင်ခဲ၊ ကြေးနီနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုသောသံမဏိများကဲ့သို့သောစက်မှုထုတ်ကုန်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ထိုအချက်ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရောင်းဝယ်မှုအများဆုံး သတ္တုများမှာ ရွှေ၊ ငွေ၊ ပလက်တီနမ်တို့ ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ရွှေနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါတွင် သင်သည် ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြင့် ဆုချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ န့် နှင့် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းအများစုမှ ကြီးမားသောငွေဖြစ်လွယ်ခြင်း။
ငါတို့ထိတွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းကုန်ပစ္စည်းများတွင်ကျောက်မီးသွေး၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံကဲ့သို့သောစွမ်းအင်များပါဝင်သည်။ အဆုံးတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်စည်ဖြင့်အမြဲတမ်းကုန်သွယ်လိမ့်မည်။
US ရေနံဈေးကွက်ကို WTI Benchmark ဖြင့် ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်သည်။
ကျန်ရေနံဈေးကွက်မှာ Brent Crude Oil Benchmark ကို အသုံးပြုပါတယ်။
အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများနည်းတူစွမ်းအင်များ၏တန်ဖိုးကိုစျေးကွက်၏ ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားကအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ ပထဝီနိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များကြောင့် OPEC သည်၎င်း၏ထောက်ပံ့ရေးအဆင့်ကိုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားသည်လည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် အကယ်၍ OPEC မှရေနံထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ရန်သို့မဟုတ်နှေးကွေးရန်ဆုံးဖြတ်ပါကစျေးနှုန်းမြင့်တက်နိုင်သည်။
ပွဲစားတိုင်းကတူညီသောစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားရသောကုန်သွယ်စွမ်းအင်စာရင်းကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
Gulf Coast ဓာတ်ဆီ။
စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များကိုကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးအများစုမှာ ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားသည်။ သို့သော်မိမိကိုယ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရန်စွန့်စားရသည့်အခါမည်သည့်ကုန်စည်၏တန်ဖိုးမဆိုမကြာခဏပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ အဓိကအားဖြင့်ရောင်းလိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအား၊ ၎င်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောဖြစ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
စိုက်ပျိုးရေးကုန်ပစ္စည်းအများစုကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ အချို့သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ကုန်ပစ္စည်းများကို“ ခက်ခဲသော” နှင့်“ နူးညံ့သော” အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြောင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်။
ပျော့ပျောင်းသော ကုန်စည်များကို စိုက်ပျိုးရေးဘက်တွင် ရည်ညွှန်းရာတွင် အသုံးပြုသည်။
ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုတွင်အသစ်ဖြစ်နေသောလူအများစုတို့သည်ရေရှည် ETF မှတဆင့်ရိုးရာနည်းလမ်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ သို့သော်တစ် ဦး အပေါ်ကုန်သွယ်မှုမှအားသာချက်များ၏အမှိုက်ပုံရှိပါတယ် ကာလတို အွန်လိုင်းကုန်စည်ပွဲစားကနေတဆင့်အခြေခံ။
၎င်းတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။
Long နှင့် Short သွားပါ
ကုန်စည်ကုန်သွယ်မှု၏အဓိကအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာမြင့်တက်လာခြင်းမှရရှိသောအကျိုးအမြတ်များရရှိစေရန်ဖြစ်သည် နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းများကျဆင်း။ ဆိုလိုတာကမင်းမှာမင်းသွားခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာ ရှည်လျားသော or တိုတောင်းသော။ ဒါနဲ့မတူဘူး ရိုးရာအစုရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏တန်ဖိုးတက်လာလျှင်သင်သာအမြတ်အစွန်းရစေသည်။
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်မှန်ကန်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်းသည်အတိုင်းသင်ဖြစ်စေလမ်းအကျိုးအမြတ်စေနိုင်သည်။ သွားရမယ့်ဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြပါရစေ တိုတောင်းသော:
Brent ရေနံစိမ်း ဝယ်လိုအား ကျဆင်းသွားသည်။
အဖွင့်ဈေးကွက်တွင်၊ ယင်းကြောင့် Brent ရေနံစိမ်းဈေးကျသွားသည်။
မင်းလုပ်လိမ့်မယ် တိုတောင်းသော တစ် ဦး အားမရအားဖြင့် Brent ရေနံ ရောင်းချ အမိန့်။
Brent ရေနံစိမ်းစျေးနှုန်း 4% ကျဆင်းပါက - သင်အမြတ် 4% ရလိမ့်မည်။
ရေတိုရောင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနှင့်ထိုကိစ္စအတွက်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းမဆို၊ CFD ကုန်သွယ် ဆိုက်။
ကျနော်တို့ခေတ္တသော်လည်း, အစောပိုင်းကသြဇာဖုံးလွှမ်း။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုသောအခါ၌သြဇာရရှိရန်ပြproblemနာမရှိပါ။
မင်းနေရာချပြီဆိုပါစို့ တိုတောင်း - ရောင်း ငွေကို $30 ဖြင့် မှာယူလိုက်ပါ။
လာမယ့်ရက်တွေမှာ ငွေတန်ဖိုးက 12% ကျသွားတယ်။
၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် $3.60 အမြတ်ကို ဖော်ပြသည်။
Leverage 1:10 ဖြင့် သင့်အမြတ်ကို 10 ဆ ချဲ့ထွင်သည်။
ဤကုန်သွယ်မှုတွင် သင်၏စုစုပေါင်းအမြတ်သည် ယခု ၃၆ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
စွန့်စားလေကြီးလေလေ၊ သို့သော်သင်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏အရင်းအနှီးကိုကာကွယ်ရန်သင်၏ဘတ်ဂျက်အတွင်းကုန်သွယ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
ကျနော်တို့အစောပိုင်းကကျနော်တို့ထိမိစီးပွားရေးအခက်အခဲကာလအတွင်းကုန်သည်များရွှေကဲ့သို့ကုန်စည်များပါဝင်သည်၎င်းတို့၏ portfolios အမျိုးမျိုးကွဲပြားလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းရွှေတန်ဖိုးမြင့်တက်လာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤအဖိုးတန်သတ္တုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အောက်ခြေလမ်းကြောင်းတစ်ခုတွင်ရှိသောစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုကာကွယ်ရန်သဘာဝကျသည်။
Value ၏ Stores
အချို့သောအဖိုးတန်သတ္တုများကို“ တန်ဖိုးရှိစတိုးဆိုင်များ” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာငွေ၊ ရွှေတို့ကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများသည်သူတို့၏တန်ဖိုးကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ပြီးအချိန်ကာလ၏သမိုင်းအစဉ်အလာအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤအကြောင်းကြောင့်သတ္တုသည်ငွေဖောင်းပွမှုနှင့်၎င်းကဲ့သို့သောအရာများကိုကာကွယ်ရန်လုံခြုံစိတ်ချရသောကွန်ယက်တစ်ခုဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်အစားရန်ပိုနှစ်သက်ပါလိမ့်မယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ တန်ဖိုးရှိသောစတိုးဆိုင်များတွင်အထက်ပါ ETF လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
မျက်စိကန်းစွာအရောင်းအ ၀ ယ်မလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများတွင်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျှော်လင့်ချက်အချို့မှရရှိရန်သင့်အတွက်မဟာဗျူဟာများစာရင်းကိုအတူတကွစုစည်းထားသည်။
နှစ် ဦး စလုံးသည်စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်ကိုခန့်မှန်းရန်အလွန်အမင်းအထောက်အကူပြုသော်လည်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတို့သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာနှစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်စတင်ကြပါစို့၊ ၎င်းသည်နှစ် ဦး ထဲ၌အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်။
အခြေခံကျသောကုန်သွယ်မှုသည်နောက်ဆုံးပေါ်စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္newsာရေးသတင်းများနှင့်အမီလိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ အမှန်မှာ၊ သင်သိသောမည်သည့်သတင်းသည်သင်ရွေးချယ်ထားသောကုန်စည်၏ရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်ရှာနိုင်သောအခြားနေရာများ၊ ပုံမှန်ရင်းမြစ်များ မှလွဲ၍ ကျန်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာသည်အရောင်းအ ၀ ယ်စာရင်းသွင်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူကြပြီးဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအီးမေးလ် (သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း) မှတစ်ဆင့်မွမ်းမံချက်များကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သော Yahoo Finance ကဲ့သို့သောရင်းမြစ်များကိုလည်းသင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင်ဤအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်လိုပါကဆိုက်တွင်သင်ရွေးချယ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းကိုသာရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက် ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်အားသက်ဆိုင်ရာသတင်းပုံပြင်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီအသိပေးလိမ့်မည်။
အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် နားလည်ရလွယ်ကူသော်လည်း နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုကို အပြည့်အဝနားလည်ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်သည်။ ကုန်စည်ကုန်သည်များထံ လက်လှမ်းမီနိုင်သော စျေးနှုန်းဇယားများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းရာပေါင်းများစွာရှိသည်။ အနည်းငယ်သောအခြေခံကိရိယာများကိုကောင်းစွာနားလည်ရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏တန်ဖိုးကျဆင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာလိုက်လံဖမ်းဆီးနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, သမိုင်းဆိုင်ရာစျေးနှုန်းဇယားကုန်စည်၏အမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ကိုမြင်လျှင်အဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုညွှန်ပြ tools များအမှိုက်ပုံနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏ underbought သို့မဟုတ် overbought status ကိုရှိပါတယ်။ နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုလေ့လာခြင်းသည်ကုန်သည်များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်မည်သည့်အချိန်တွင်ပါဝင်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးသည်။ ထို့ကြောင့်လွှဲကုန်သည်များသည်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုထုတ်လွှတ်ကြသည်။
သငျသညျ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစဉ်းစားသောအခါဤသည်သဘာဝကျပါတယ် လွှဲကုန်သွယ် တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိရာထူးများကိုရယူထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရေတိုကုန်သွယ်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်နေပါက - ကဲ့သို့သော နေ့ကုန်သွယ်မှု, ထို့နောက်ဇယားများကိုဖတ်ခြင်းသည်လုံးဝမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းမှာနေ့ကုန်သွယ်သည့်အခါသင်တစ်နေ့တာရာထူးများစွာကိုဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ထို့ကြောင့်အခြေခံသဘောတရားများသည်အနည်းငယ်သက်ဆိုင်မှုမရှိသည် - အနည်းဆုံးရေတိုတွင်။ ဒီကုန်စည် တစ်ရက်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ အသေးစားစျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုမှရရှိသောအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ စျေးကွက်ကိုလျောက်ပတ်စွာအမြတ်အစွန်းရရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
ခုခံတွန်းလှန်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုအဆင့်များကိုကုန်သွယ်ရေးကမ္ဘာတွင်အသုံးပြုသည်။ The အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ level ကို 'price point' လို့လူသိများတယ် - ဒါကထပ်ဆင့်တန်ဖိုးကျဆင်းမှုကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ The ခုခံခြင်း အဆင့်ကိုမဆိုထပ်မံမြင့်တက်ခြင်းမှအထက်သို့လမ်းကြောင်းသစ်ကာကွယ်ပေးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ထောက်ခံမှုသို့မဟုတ်ခုခံလိုင်းကျိုးမည်မဟုတ်ကြောင်းအာမခံချက်မရှိပါ။ သမိုင်းကြောင်းအရဒီအဆင့်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ကာကွယ်ပြီးပြီ။
ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏တန်ဖိုးကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းသည်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အကယ်၍ ရွှေသည်အထက်သို့တက်နေသည့်စျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းကိုတွေ့ကြုံနေပြီးခုခံနိုင်မှုအဆင့်နီးကပ်နေလျှင် - ဖြစ်နိုင်ခြေမှာအထက်သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အတိတ်ကထောက်ပံ့မှုနှင့်ခုခံမှုအဆင့်များကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်နည်းဗျူဟာတွင်ထည့်သွင်းလိုပါက၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ရိုးရှင်းစွာဖန်တီးပါ ဝယ်ခြင်း အနည်းငယ်မှာယူသည် အထက် သက်ဆိုင်ရာထောက်ခံမှုလိုင်း။ သင်တို့သည်လည်းတစ် ဦး ကိုဖန်တီးသင့်ပါတယ် ရောင်းချ အမိန့် အောက်တွင် ခုခံစျေးနှုန်း။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတစ်ချိန်ချိန်တွင်ခုခံမှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုအဆင့်များကျိုးပဲ့နိုင်သည်။ ထိုအရာကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်ဖန်တီးသင့်သည် ရပ်တန့်-အရှုံး မည်သည့်အလားအလာဆုံးရှုံးမှုကိုကန့်သတ်ရန်အမိန့်။ သင်သည်သင်၏ stop-loss တန်ဖိုးကိုထည့်ပြီးပါကသင်၏ပွဲစားသည်သင်၏အမှာစာတွင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းအတိုင်းသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
ကုန်စည်ကူးသန်းခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ အခု တရားမျှတမှုဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကျနော်တို့လည်း အန္တရာယ်တွေအကြောင်း ပြောသွားမယ်။
ကုန်ကြမ်းများအထူးသဖြင့်ရေနံစိမ်းနှင့်ရွှေတို့ကဲ့သို့အပြာရောင်ချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာများနှင့်ရှယ်ယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်သောပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။ ကုန်သည်များစွာသည်မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်စျေးကွက်သည်မတည်ငြိမ်လေလေကုန်သွယ်မှုသည်မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်းထွက်သွားပါကအကျိုးအမြတ်များလေလေဖြစ်သည်။
ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်မှုလောကသို့သင်အသစ်ရောက်ရှိနေပါကမတည်ငြိမ်မှုမြင့်မားခြင်းသည်သင်စတင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ သင်အမြင့်ဆုံးကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်မည်မှာသံသယများကသင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်၏ကျန်းမာရေးကိုများစွာထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးဘီးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့။
ရိုးရာအစုရှယ်ယာများ (IBM နှင့် Nike ကဲ့သို့သောအတွေးများကိုစဉ်းစားပါ) တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုများသောအားဖြင့်ခွဲဝေမှုပုံစံဖြင့်ပေးချေသည်။ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့်ပတ်သက်လျှင် - ငွေပေးချေမှုကိုကူပွန်ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
သို့သော်ကုန်စည်များသည်မည်သည့် ၀ င်ငွေမှမပေးနိုင်ပါ။ ကုန်စည်၏စျေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းကိုမှန်ကန်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းမှအမြတ်အစွန်းရရှိမှသာသင်အမှန်တကယ်ငွေရှာမည်။
သင့်ရဲ့ပွဲစားကိုဘယ်လောက်အထိကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုတာသင့်တည်နေရာပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းကိုထိန်းချုပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကြောင့်ဖောက်သည်များအားမည်မျှသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုထိန်းချုပ်ထားသောပွဲစားများသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။
ယူကေနှင့်အီးယူတို့တွင်သုံးစွဲသူသည်ရွှေ ၁း၂၀ နှင့်အခြားကုန်ပစ္စည်းအများစုအတွက် ၁း၁၀ ကိုကန့်သတ်ထားသည်။ အချို့သောပြည်ပပွဲစားများသည် ၁: ၁၀၀ အထိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်းလိုင်စင်မရှိဘဲဖြစ်နိုင်သည်။
ပြောခဲ့တာတွေအားလုံးနှင့်အတူ, သင်ယခုလုပ်သကဲ့သို့သြဇာကိုနားလည်ခြင်း - အရှုံးနှင့်အမြတ်အစွန်းတို့ကိုသင်သတိရနေလျှင်သင်အဆင်ပြေသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာနှင့်အသုံးချခြင်းသို့စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအမြဲတမ်းထည့်သွင်းရန်အကြံပြုပါသည် ရပ်တန့်-အရှုံး နှင့် အမြတ်အစွန်း အမိန့်။
စတော့ရှယ်ယာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သောင်းချီထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်ကြပြီးသင်ယေဘုယျအားဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့စျေးကွက်အမျိုးမျိုးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ပွဲစားအချို့သည်သင့်အားငွေ၊ ရွှေ၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုသာကမ်းလှမ်းသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်တွေ့ရမည့်နောက်ထပ်ရွှေနှင့် Brent ရေနံစိမ်းကိုသာရောင်းချလိမ့်မည်။
အောက်ဖော်ပြပါအရောင်းအ ၀ ယ်ကုန်သည်များပုံမှန်အသုံးပြုသည့်အကြံပြုချက်ငါးခုကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုအလွန်ဝေးကွာသောနေရာမှဖြတ်သန်းရန်သင့်အားအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။
အဖြစ်ဖျောပွအဖြစ် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် သင်တန်းများ, ရာပေါင်းများစွာကုန်စည်ကုန်သွယ်စာအုပ်တွေစောင်ရေထဲမှာရှိပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်စာအုပ်အများစုသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံများဖြင့်လာကြသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သူကိုရှာဖွေနိုင်သင့်သည်။
သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါကုန်စည်နှင့်သက်ဆိုင်သောစာအုပ် ၆ ခုကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
Dummies အတွက် ကုန်ပစ္စည်းများ - Amine Bouchentouf မှ
ပိုများသောဖြစ်နိုင်ခြေ ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေး: ကုန်စည်စျေးကွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ မဟာဗျူဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာများဆိုင်ရာ ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခု အောင်မြင်မှု၏ မသာမယာများကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်သည်- Carley Garner မှ
ကုန်စည်ရွေးချယ်စရာများ- ကမ္ဘာ့အမြတ်အစွန်းဆုံးဈေးကွက်တွင် ကုန်သွယ်မှုနှင့် အကာအကွယ်ပေးမှု မတည်ငြိမ်မှု – Carley Garner နှင့် Paul Brittain တို့မှ
စာအုပ်ငယ် ကုန်စည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု- John Stephenson မှ
Hot Commodities- ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဈေးကွက်တွင် မည်သူမဆို အမြတ်အစွန်းရအောင် ဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သလဲ – Jim Rogers မှ
ကုန်သည်တစ်ဦး၏ပထမဆုံးစာအုပ် ကုန်စည်များအကြောင်း- ကမ္ဘာ့တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးစျေးကွက်မိတ်ဆက်- Carly Garner
ပိုများသောတန်ချိန်ရှိပါတယ်။ ဤစာအုပ်သည်အခြားကုန်သည်များကဤစာအုပ်သည်အထောက်အကူပြုသည်မဟုတ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအချို့ကိုစစ်ဆေးရန်ကောင်းသည်။ သငျသညျမှာရှိနေစဉ်, အစပြုသူများအတွက်နည်းပညာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစာအုပ်တွေရှာဖွေပါ - ကုန်သွယ်၏ဤရှုထောင့်ကိုသင်ယူတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Demo Account တစ်ခုကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါ။
အကယ်၍ သင်၏ပွဲစားကသရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုပေးလျှင်လက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကိုင်တွယ်သင့်သည်။ သရုပ်ပြအကောင့်များကိုကုန်သည်အမျိုးမျိုးမှအသုံးပြုသည်။ အတွေ့အကြုံရှိအတွေ့အကြုံရှိသူများမှသည်အသစ်ရောက်ရှိလာသူများအထိဖြစ်သည်။ သရုပ်ပြအကောင့်ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ သင်သည်စျေးကွက်အခြေအနေများကိုအပြည့်အ ၀ ထင်ဟပ်စေသောနယ်ပယ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုကုန်သွယ်နိုင်လိမ့်မည်။
သင့်အားစက္ကူရံပုံငွေသို့မဟုတ်သရုပ်ပြငွေများပေးလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများကိုအခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်မှန်ကန်သောငွေကို အသုံးပြု၍ တိုက်ရိုက်အကောင့်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလမ်းညွှန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်မဟာဗျူဟာများနှင့်အန္တရာယ်များအကြောင်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ထို့ကြောင့်သင်၏အရင်းအနှီးကိုစောင့်ရှောက်ရန်အရေးကြီးပုံကိုသင်နားလည်ပါသည်။ စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကျင့်သုံးရာတွင်သင်၏နည်းဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအရာအနည်းငယ်ရှိသည်။
သင်၏ဘဏ်စာရင်းကိုစီမံရန် များစွာသောကုန်သည်များသည်အစုရှယ်ယာပမာဏကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပမာဏတစ်ခုအထိကန့်သတ်ထားပြီး ၄ င်းတို့၏ကြီးမားသောကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်၎င်းကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားကြသည်။ ဥပမာတစ်ခုပေးပါကသင်၏စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုအကောင့်၏ ၁% ကိုသင်သာရှုံးနိူင်သည်။
သြဇာနှင့်အတူသတိထားပါ: ကျနော်တို့သြဇာအကြိမ်အနည်းငယ်ထိမိပါတယ်။ သတိထားပါ မင်းတို့ကြိုးကိုသင်မလေ့လာခင်အထိကုန်သွယ်ရန်မအကြံပြုပါနှင့်
Stop-loss အမိန့်ကိုသုံးပါ: အမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည် ရပ်တန့်-အရှုံး မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်သွယ်သည့်အခါအမိန့်။ ဒါကသင့်ရဲ့ပျက်စီးမှုကန့်သတ်ချက်ပဲ မင်းကန ဦး အစုရှယ်ယာ ၁.၂% ထက်ပိုပြီးမရှုံးချင်ဘူးလို့ပြောရင်တော့အဲဒီ့ဈေးနှုန်းမှာ Stop-loss order ကိုထားခြင်းကသင့်ကို ၁.၂% ထက်ပိုတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုတားဆီးလိမ့်မယ်။
အမြတ်ယူရန်မှာယူပါ။ အသုံးပြုခြင်း အမြတ်အစွန်း အမိန့်ကိုအသုံးပြု။ ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ရပ်တန့်-အရှုံး အမိန့်သာဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်။ ၂% ထက်နည်းသောအကျိုးအမြတ်များကိုသင်လိုချင်ပါကသင်၏ဆုံးရှုံးမှုအမိန့်သည်ထိုအချက်ကိုထင်ဟပ်သင့်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အစိမ်းရောင်တွင် ၂% ဖြစ်သည့်အခါသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်လိမ့်မည်။
စျေးကွက်တွင်းစံချိန်ကိုမှီပါ ရွှေနှင့်အခြားထိုကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းများကိုကမ္ဘာ့စျေးကွက်များ၌တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီနှင့်တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ဆိုသော်လည်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောကြသည်။ တနင်္လာနေ့နှင့်သောကြာနေ့များအကြားအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှုနှင့်ငွေဖြစ်လွယ်မှုမြင့်မားခြင်းမှသင်အကျိုးခံစားရလိမ့်မည်ဟုသင်တွေ့ရှိသင့်သည်။ အစပြုသူများသည်ကြီးထွားလာသောကုန်သွယ်ရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်ကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်မျှော်လင့်ပါတယ် ကုန်သွယ်အကြံပေးချက်များ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်၏စွမ်းရည်ကိုဖြည်းဖြည်းနှင့်မှန်မှန်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။
၄။ AVATrade - တင်းကျပ်သောပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူကုန်စည် CFDs
AvaTrade သည်ကုန်သည်များအားဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ပွဲစားကိုဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုများ၊ သြစတြေးလျ၊ ဂျပန်၊ ယူအေအီးနှင့်တောင်အာဖရိကစသည့်စည်းမျဉ်းဥပဒေများဖြင့်လိုင်စင်ချထားပေးသည်။ ဤသည်မှာကုန်သည်များအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးအတွက်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များတွင်ဘဏ္reportingာရေးအစီရင်ခံခြင်း၊ သုံးစွဲသူ၏ရန်ပုံငွေခွဲခြားခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဤအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီသည် cryptocurrencies နှင့် forex ကဲ့သို့သော CFDs များစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်ကုန်ကြမ်း CFD များဖြစ်သောသတ္တုများ၊ စွမ်းအင်များနှင့်ကိုကိုးနှင့်သကြားကဲ့သို့သောစိုက်ပျိုးရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကရေနံကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ၁: ၁၀၀ ၏သြဇာရှိသည့် CFDs၊ ရွှေ ၁း၂၀၀ နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကြေးနီ၊ ပလက်တီနမ်၊ အကယ်၍ သင်သည်ဗြိတိန်နှင့်ဥရောပ၌အခြေစိုက်ပါက ESMA ကန့်သတ်ချက်များဖြင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်လွတ်မြောက်သွားလိမ့်မည်။
ပြန့်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ - ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများမှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည် AvaTrade သည်အပြိုင်အဆိုင်များနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်စာရေးရန်အချိန် - ရေနံစိမ်းသည် ၀.၃၃%၊ CFDs များမှာ ၀.၃၄% နှင့်ငွေသည် ၀.၂၂၉% ဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်သွားလိုလျှင် AvaTrade ၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင် AvaTradeGO အက်ပလီကေးရှင်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်သည်။ ဒီအက်ပ်ကသင့်အကောင့်ထဲကိုရန်ပုံငွေထည့်သွင်းဖို့လွယ်ကူစွာအော်ဒါတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်လိုအပ်သမျှကတော့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုပဲ။
Avatrade သည်သင့်အား tools များ၊ ဇယားများနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပံ့ပိုးပေးသောလူကြိုက်များသောတတိယပါတီကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း MetaTrader4 နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ငါတို့အစောပိုင်းကပြောခဲ့သလိုပဲဒီ platform ကနေတစ်ဆင့် automated trading bot ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
ပွဲစားတစ်ယောက်ကအခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကိုပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အမှန်တကယ်ငွေသားဖြင့်ချက်ချင်းစတင်စတင်ရန်လုံလောက်သောယုံကြည်မှုရှိပါကသင်၏ကုန်စည်ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ စတင်၍ စတင်နိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်း CFDs အပေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်သြဇာ
အကျိုးရှိသော 'AvaTradeGO' အက်ပ်
100 နှစ်ပျက်ကွက်ပြီးနောက် $ 1 admin ရဲ့အခကြေးငွေ
၃။ Capital.com - ကော်မရှင်၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး
Capital.com သည်ကော်မရှင်မှကင်းလွတ်သောအခြား platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွင်အကောင်းဆုံးကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများစာရင်းကိုဖော်ပြထားသည်။ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်စူပါအသုံးပြုသူနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်ပြီးလူသစ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကိုရှင်းလင်းစွာပုံစံပြုထားသည်။
ဤပွဲစားကုမ္ပဏီထံမှ စျေးကွက်ဦးဆောင်ဖြန့်ကြက်မှုများအပြင် အထက်ဖော်ပြပါ 0% ကော်မရှင်နှင့် အခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် 100% ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို သင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံ အကောင့်ဖွင့်သောအခါတွင် သင့်အား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၊ FCA၊ CySEC၊ ASIC နှင့် NBRB တို့မှ ကာကွယ်ပေးထားသည်။
သင်ဟာအရောင်းအ ၀ ယ်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ပိုအကူအညီနှင့်လမ်းညွှန်မှုလိုအပ်လျှင်၊ သင်ဟာကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်များ၊ အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ Capital.com သည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ကိုကမ်းလှမ်းထားပြီးအလွန်လျင်မြန်သောအမိန့်ကိုဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုကတိပေးသည်။
Capital.com မှပေးသောအပြိုင်အဆိုင်ပြန့်ပွားမှုဥပမာတစ်ခုပေးရန်ယနေ့ Brent ရေနံစိမ်းသည် ၀.၁၀%၊ ရွှေသည် ၀.၆၄% နှင့်အမေရိကန်ရေနံစိမ်း ၀.၀၄ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်တွင်ရှိသည်။ သို့သော်ပြန့်ပွားခြင်း, ပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးကဲ့သို့နေ့တိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအတက်အကျလိမ့်မည်။
အခြားကုန်ပစ္စည်းများတွင်မည်သည့်အရာကိုမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြသခြင်းကိုသင်သိလိုပါက ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏အခကြေးငွေယူပါ။ ထိုနေရာတွင်သင်ရောင်းဝယ်လိုသည့်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာကိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေရေး function ကိုသုံးနိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်ကုန်စည် CFD များကိုဖွင့်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုမလိုအပ်ဘဲသင်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ CFDs များဖြင့်သင်၏အကျိုးအမြတ်ကိုသြဇာသက်ရောက်စေနိုင်ပြီး၎င်းသည် ESMA စံသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိနေလိမ့်မည်။
FCA၊ CySEC၊ ASIC နှင့် NBRB မှ ထိန်းညှိထားသည်။
ကုန်သွယ်ရေးကုန်စည်ကော်မရှင် - အခမဲ့
ဘဏ်ဝိုင်ယာကြိုးများတွင် အနည်းဆုံး အပ်ငွေ $250
ကုန်စည်ဒိုင်ကုန်သွယ်ရေးပွဲစားများ - နိဂုံး
ကုန်စည်ကုန်သွယ်မှု၏လူကြိုက်များမှုသည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တိုးပွားလာသည်။ ဤသည်အဓိကအားဖြင့်ဤပိုင်ဆိုင်မှုကမ်းလှမ်းမှုများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်နှစ်ယောက်စလုံးသွားနိုင်တယ် ရှည်လျားသော နှင့် တိုတောင်းသော ကုန်သွယ်ရေးတစ်ခုမှာဆိုလိုတာကသင်ပိုင်ဆိုင်မှုမှအကျိုးအမြတ်ကိုဆုံးရှုံးမှုအပြင်စျေးနှုန်းတက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ဒါ့အပြင် CFDs, futures, options, ETFs နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောငွေများ၊ သို့မဟုတ်ရွှေကဲ့သို့ပစ္စည်းတစ်ခု၏တန်ဖိုးကိုတူရိယာများဖြင့်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်သင်သည်သင်၏ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများနှင့်အတူစတင်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသည်။ ပွဲစားပလက်ဖောင်းများ - ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည့်အရာများကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုသုံးစွဲသူအတွက်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့်ပေးသည်။
သငျသညျရေတိုနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကဲ့သို့ကုန်စည်များရေတိုကာလ၌ကုန်သွယ်နိုင်ကြသည်သာမက။ သို့သော်ကုန်ပစ္စည်းများကို ETF မှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ရေရှည်တွင်သင်၏ရွေးချယ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
ကောင်းမွန်သောပွဲစား (သာမာန်အားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော) နှင့်သာစာရင်းသွင်းပါ၊ ရွှေ၊ ရေနံစသည်ဖြင့်သင်ကုန်သွယ်လိုသည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်နိမ့်ဆုံးအားသင်၏အကောင့်ထဲသို့အပ်နှံပြီးစျေးနှုန်းကိုသင်ထင်သလားပေါ် မူတည်၍ ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းအမိန့်ကိုတင်ပါ။ ပိုင်ဆိုင်မှု၏မြင့်တက်သို့မဟုတ်ကျလိမ့်မည်။
ဟုတ်တယ်။ ပွဲစားအများစုသည်ကုန်ပစ္စည်း CFD များအပေါ်ဖောက်သည်များအားသြဇာသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ESMA စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရသင့်အားကုန်ပစ္စည်းအားလုံးနှင့် ၁း၂၀ အထိရွှေကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းသင့်သည်။
ပွဲစားတစ် ဦး ဟုတ်မှန်သည်မမှန်ကိုသိရန်သေချာသည့်မီးဆိုသည်မှာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံမှလိုင်စင်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ လေးစားခံရသောအဖွဲ့များတွင် FCA၊ CySEC, ASIC နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ ထိုကော်မရှင်များသည်ကုန်သွယ်ရေးနေရာအားလုံခြုံစိတ်ချစေရန်အတွက်တည်ရှိသည်။
ဟုတ်တယ်။ ကုန်စည်များကိုရေရှည် အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာငွေလဲလှယ်သောကုန်သွယ်ရေးရန်ပုံငွေ (ETF) မှတဆင့်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကိုကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားကနေတစ်ဆင့်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သရုပ်ပြအကောင့်မှတစ်ဆင့်ကုန်စည်များကိုအခမဲ့ရောင်းဝယ်နိုင်ပါတယ်။ Demo အကောင့်များကသင့်အားစက္ကူ (Demo) ပိုက်ဆံဖြင့်အမှန်တကယ်ဈေးကွက်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။